Taiwan " Journey-Assist - Mahaliana any Taiwan.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Taiwan
Fampahalalana ankapobeny momba an'i Taiwan
Taiwan dia firenena maoderina sy mandroso haingana, misolo tena nosyizay misy tsangambato ara-tantara miaraka amin'ireo zavatra maoderina tsy manam-paharoa sy mahaliana.
Taipei - renivohitr'i Taiwan
Ity fanjakana ity dia eo amin'ny nosy nosasan'i Atsinanan'i Chine atsimo sy Ranomasimbe atsimo ary ny Ranomasimbe Pasifika. Ilay nosy kely, izay miaro am-pahombiazana ny fahaleovantena amin'ny PRC, dia manana kolontsaina manokana manokana izay notarihin'i Shina, Japon ary Etazonia. Nanjary lakroa teo anelanelan'ny atsinanana sy andrefana i Taiwan. Tsy hitovy amin'ny voalohany na ny faharoa.
Ny anarana faharoa amin'ny nosy Taiwan dia Formosa, izay midika hoe "Mahafinaritra" amin'ny teny Portiogey. Tamin'ny taonjato faha-16, ny tantsambo eoropeanina dia tsy afaka nanome anarana hafa ity nosy ity, talanjona noho ny hatsarany voajanahary!
Fizahan-tany tany Taiwan
20% amin'ny faritanin'i Taiwan dia valan-javaboary sy tahiry misy karazam-biby sy zavamaniry endemika. Manasitrana loharano mafana, tendrombohitra avo mahafinaritra (ny tendrony avo indrindra dia ny Tendrombohitra Yushan 3997m), torapasika kilometatra maro izay tsy ambany noho ny morontsirak'ireo toeram-pialantsasatra ao Bali sy Thailand. Ny mponina eo an-toerana, tsara toetra fa tsy ravan'ny mpizahatany, dia mbola tsy nanadino ny fomba hifaliana sy hanontany tena amin'ny tontolo mahafinaritra manodidina azy ireo.
Misy trano fandraisam-bahiny marobe hita any amoron-dranomasina, hetsika ara-rano, ny snorkeling tsara indrindra sy ny fisakafoanana tsara. Izany rehetra izany dia tsy hamela olona tsy hiraharaha.
Fulong Beach sy ny tora-dranomasina Yanliao
Ny tantara manankarena ao amin'ny nosy dia namela ireo fijery maritrano marobe - tsangambaton'ny kolontsaina japoney, sinoa ary Eoropeana.
Ny toetrandro any Taiwan. Ny toetr'andro
Misy karazany 2 ny toetrandro any Taiwan. Any amin'ny faritra avaratry ny firenena ny toetrandro dia subtropical, any amin'ny atsimo - tropikaly. Ny vanim-potoana fahavaratra eto dia manomboka amin'ny Mey ary mifarana amin'ny volana septambra. Toy ny fitsipika, mando izy ary malefaka, ny mari-pana mandritra ny andro dia miovaova amin'ny + 27 ... + 35. Ny vanim-potoana ririnina, toy ny eo amin'ny latitude afovoany, dia manomboka amin'ny Desambra ary mifarana amin'ny volana feb. Fohy sy malefaka ny ririnina eto. Amin'ny antoandro, ny mari-pana dia +19, amin'ny alina ny + 13.
Ny habetsan'ny rotsak'orana dia miankina betsaka amin'ny faritra. Amin'ny ririnina, any avaratra atsinanan'ny Central Ridge of Taiwan, dia avy ny orana tsy misy fahatapahana, ary amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy dia 200 mm ny fara-tampony isaky ny ririnina. Ny rotsakorana isan-taona eo amin'ny lemaka dia manodidina ny 2 mm. Any amin'ny faritra be tendrombohitra any Taiwan dia 500 5 mm izy io. Amin'ny ankapobeny dia avy ny orana amin'ny fahavaratra. Matetika dia miaraka amin'ny oram-baratra izy ireo amin'ity vanim-potoana ity. Any an-tendrombohitra ihany no misy ny oram-panala. Ny ampahany amin'ny firenena ambonin'ny 000 metatra dia manana maripana isan-taona 2 degre ambany noho ny sisa ta Taiwan.
Any amin'ny faritra avaratry ny firenena, ny rano dia mety indrindra amin'ny filomanosana manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Septambra, ary amin'ny faritra atsimo, mandavantaona. Fa amin'ny fahavaratra, manjaka ny hafanana, ny hamandoana avo ary ny orana, noho io antony io dia latsaka ny volana Novambra sy Oktobra ny fotoana "volamena". Ny volana ririnina dia mety indrindra hahalalana ny tsangambato ara-kolotsaina, rehefa tsy mafana sy tsy dia be ny orana. Amin'ny ririnina dia avy ny orana amin'ny alina.
Ny faharatsian'ny toetr'andro any Taiwan. Azonao atao ny misafidy taratasy na seho (rivotra, kotrokorana, mari-pana, onja, ary maro hafa).
Fitateram-bahoaka any Taiwan
Bus any Taiwan
Ny fitateram-bahoaka malaza indrindra any Taiwan dia ny bisy.
Betsaka ny orinasan'ny fiara fitateram-bahoaka mitondra fiara samy hafa. Ny fiara mpitatitra dia mihazakazaka ao an-tanàna sy toy ny fitaterana fifampiraharahana. Raha miampita ny sisin'ny distrika fitantanana any Taiwan ianao dia misy fiampangana fanampiny (ohatra, raha mandeha amin'ny faritra iray any Taipei ianao).
Taxi any Taiwan
Any amin'ireo tanàna na kely kokoa dia misy taxi iray, fa ny ankamaroan'ny mpamily dia tsy Sinoa ihany no miteny.
Noho izany antony izany, mpizahatany iray, raha tsy mahalala an'io fiteny io izy, dia mila ny fanampian'ny mpiasa amin'ny trano fandraisam-bahiny na olon-kafa avy amin'ireo mpampiasa ny Sinoa.
Metro ao Taiwan
Toerana fitobiana any taiwan
Ao Taipei ihany no misy ny metro. Ny ora fiasany dia manomboka amin'ny 6.00 ka hatramin'ny 00.00. Ny milina rehetra dia misy milina fivarotana tapakila. Ny lalana sy ny halavirana dia mamaritra ny vidin'ny dia.
Taipei. Sarintany Metro
Taiwan dia manana fitaterana an-habakabaka mandroso, misy sidina anatiny sy iraisam-pirenena. Ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra ao amin'ny firenena dia Taoyuan.
Lamasinina any Taiwan. Link Railway any Taiwan.
Ny tamba-jotra misy ny lalamby dia mandrakotra ny nosy manontolo, ka ny gara no mamela anao handeha na aiza na aiza any Taiwan.
Lamasinina any Taiwan
Ferry any Taiwan
Misy ferry amin'ny fitaterana rano, saingy tsy mihetsika ny fihetsik'izy ireo ary voafaritry ny toetrandro izany, ankoatry ny fifandraisan'ny rano amin'i Japana.
Ferry ao taiwan
Vola any Taiwan. Vola. Exchange.
Ny vola Taiwan dia ny dolara Taiwan vaovao.
New Dollar Dollar. Vola any Taiwan
Raha mivezivezy dia misy vola madinika an-jatony ny 1/2, 1, 5, 10 ary 50 ary ny fanamarihana an-davitr'ireo vola 100, 500, 1 ary 000 2 dolara any Taiwan.
Vola madinika ao Taiwan
Dolara amerikana sy vola hafa any Taiwan tsy ekena raha tsy mandoa vola.
Ny fifanakalozana fifanakalozana dia azo atao any amin'ny banky, hotely, fivarotana lehibe. Ny dolara amerikana dia ekena ifanakalozana na aiza na aiza, fa ny vola ao amin'ireo firenena tany USSR teo aloha dia tsy azo ovaina eto. Ny trano fandraisam-bahiny rehetra sy ireo fivarotana lehibe na kely kokoa dia manana sisam-bola handoavana karatra. Betsaka koa ny ATM ao Taiwan.
Mpamadika vola. Dolara Taiwan Vaovao - TWD
Converter - Kajy vola. Ny fampianarana dia havaozina tsy tapaka.
Masaka any Taiwan
Ny fahandro Taiwanese dia mampifangaro ny fomban-drazana sinoa sy Japoney. Ny lovia any Taiwane dia tsy dia avo loatra kaloria. Amin'ireo vokatra ireo dia ny ginger sy ny karazana hazan-dranomasina rehetra no tena ampiasaina.
Tsara homarihina koa ny lovia toy ny trondro nandrahoina miaraka amina anana, patsabe nendasina miaraka amina cashews, tuna misy saosy masiaka, lasopy trondro Xian-yu, trondro nendasina miaraka amin'ny saosy voanjo, fangaro namboarina holatra sy hena foza, veloma ningpo nendasina, lasopy siram-antsantsa, atodin-dranomasina voatoto ary koa ny salady jellyfish.
Salady paty Taiwan
Tian'ny Taiwanese koa ny lovia hena. Ny hena fahita eto amin'ity firenena ity dia ny henan-kisoa sy akoho amam-borona. Soso-kevitra ny hanandrana ny steak Taiwaney, izay fomban-drazana "mivantana avy amin'ny afo" ary afangaro amin'ny karaoty sy paty.
Duck amin'ny saosy caramel. Taiwan
Sakafo sinoa malaza eran-tany toy ny gana gana Peking koa no malaza eto. Azonao atao koa ny manandrana akoho voahosotra tongolo, henan'omby ao anaty saosy oyster, henan-kisoa nendasina na nandrahoina miaraka amina saosy mamy, akoho voatetika ao anaty saosy voanjo ginkgo, lasopy akoho amam-borona miaraka amin'ny paty Ji-si-tang-myan, paty nendasina hena sy / na legioma chow mein.
Omano koa ny sakafo fialan-tsasatra any Taiwan. Anisan-dry zareo -
Ilay antsoina hoe mofomamy volana, miomana amin'ny fararano mandritra ny Fetin'ny volana
Mofomamy amin'ny antoandro (cookies mofomamy). Taiwan
Horonam-bokatra lohataona, izay voaomana amin'ny volana aprily
Vary avy amin'ny ranom-bary dia miomana amin'ny Fetin'ny Dragon
Ny antsoina hoe mofomamy mena namboarina tamin'ny nahaterahana.
Ny sakafo mora sy sakafo haingana indrindra any Taiwan no amidy amin'ny tsofa amin'ny alina. Raha hamonjy vola, tsara kokoa ny mividy vokatra eto an-toerana, satria ny vahiny no lafo kokoa.
Fiantsenana any Taiwan
Souvenir any Taiwan
Azonao atao ny miverina avy any Taiwan miaraka amin'ny zavatra mahafinaritra toy ny firavaka avy amin'ny haran-dranomasina, souvenir jade, akanjo landy misy embroidery, mpankafy taratasy misy sary hosodoko, mason-javaboary misy modely, lovia seramika voaravaka firavaka, serivisy serivisy, tsangambato hazo sarobidy, jiro vita amin'ny hazo. paompy haingon-trano, menaka manitra sy fanatsarana tarehy.
Any Taiwan, ny foibe ara-barotra misy ny isam-pahaizana manokana dia matetika mipetraka eo akaikiny, mamorona faritra manodidina. Ohatra, misy ny efitrano fivarotana souvenir sy efitrano fanaovana pharmacy.
Tsenan'ny alina Shilin. Taiwan
Tokony mifampiraharaha amin'ny mpivarotra amin'ny bazary sy magazay kely ianao. Manome fihenam-bidy lehibe izany. Raha tsy mahay miteny anglisy mihitsy ilay mpivarotra, ary miteny sinoa ianao, dia azonao atao ny manandrana mampiasa calculator na penina amin'ny loharano sy taratasy kely fotsiny.
Toeram-pivarotana ao Taipei City. Toeram-pivarotana ao Taipei City
Misy toeram-pivarotana lehibe any amin'ireo tanàna lehibe indrindra any Taiwan. Any Taipei, azonao atao ny mitsidika ny Taipei City Mall. Ivotoerana fiantsenana sy fialamboly ambanin'ny tany izy io, izay mizara ho sehatra 4: akanjo, kojakoja, elektronika, vokatra sakafo. Any Kaohsiung, olona marobe no mirohotra mankeny amin'ny Dream Mall, izay misy fivarotana 2 sy toerana fialamboly hafa.
Global Mall Taiwan
Ao Xinbei, afaka mandeha any amin'ny Global Mall misy ambaratonga maro ianao. Eto ianao dia afaka mahita trano fisakafoanana sy fivarotana fahatsiarovana marobe. Misy ihany koa ny fotoana mety amin'ny fiantsenana mahafinaritra any Taichung, izay amidy souvenir tena izy maro, manomboka amin'ny landy sinoa ka hatrany amin'ny zavamaniry fanafody. Ny toeram-pivarotana lehibe indrindra eto amin'ity tanàna ity dia antsoina hoe Taroko Mall, Xiang Jiao Xin Le Yuan ary Sunshine Plaza Outlet.
Serasera finday sy Internet any Taiwan
Amin'ny ankapobeny, ny serasera finday eto amin'ity firenena ity dia novolavolaina tsara ary asehon'ny mpiasan'ny fifandraisan-davitra momba an'i Telofone Far Eastone, Taiwan Cellular ary ny KG Telecom. Izy ireo dia miasa tsy mihetsika amin'ny lafiny rehetra, afa-tsy amin'ny toerana alpine sasany.
Mametraka izany amin'ny drafitra ho an'ny taona manaraka!